Madaxweyne Trump Maraykanka oo amray in Xarumaha Dhexe ee AFRICOM laga soo wareejiyo Jarmalka. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Madaxweyne Trump Maraykanka oo amray in Xarumaha Dhexe ee AFRICOM laga soo wareejiyo Jarmalka.
Madaxweynaha dalka Maraykanka, Donald Trump waxa uu amar ka bixiyey in Taliska Guud ee Hawlgalka AFRICOM laga soo wareejiyo Xarumahooda Dhexe ee haatan ku yaalla magaalladda Stuttgart ee dalka Jarmalka oo ay ku nagaayeen tan iyo sanadkii 2008-dii.
Khilaafka soo kala dhex galay Dowladaha Maraykanka iyo Jarmalka ayaana loo aaneynayaa sababaha keenay in Xarumihii ugu waa weynaa ee AFRICOM laga soo wareejiyo magaalladdaasi oo ay ka hawl-galaan 1,500 Ciiddan iyo Shaqaale Rayid ah oo ka tirsan Hawlgalka AFRICOM.
Qorshaha Madaxweyne Trumo ee dib-u-meeleynta Xarumaha Dhexe ee Afrika waxa lagu sheegay inay qeyb ka tahay Qorshaha Maamulkiisa ee lagu yareynayo Tirada Milliteriga Maraykanka ee ku sugan Jarmalka, wuxuuna Trump ku naqdiyey Dowladda Jarmalka inay ku guul-daraysteen inay kordhiyaan Miisaaniyadda Arrimaha Ciiddamada.
Qorshaha Trump ee bedelista Xarumaha Dhexe ee AFRICOM ayaa laga yaabaa in laga laabto, haddii uu Madaxweyne cusub ku guuleysto Doorashadda Madaxtinimadda ee bilowga bisha November ka dhici doonta Maraykanka.
Taliyaha Taliska AFRICOM, Jeneral Stephen Townseed waxa uu sheegay inay muddo dhowr bilood ah qaadan doonto sidii ay Xarumaha Dhexe ee Hawlgalka AFRICOM looga soo wareejin lahaa Jarmalka.
Waxa uu intaasi ku daray inay oo uu sheegay inay kala xulan doonaan Saldhigyada Cusub sidii loogu wareejin lahaa goobo kale oo ka tirsan Europe ama gudaha Maraykanka.
Taliyaha Taliska AFRICOM waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay inay Saaxiibada Dowladaha Afrika garwaaqsadaan inay AFRICOM ka go’an tahay inay sii wadaan shaqada kala dhexeyso dalalka Afrika iyo La-hawlgalayaasha kale, si loo xaqiijiyo Danaha labada dhinac.
Go’aanka Madaxweyne Trump ee bedelista Xarumaha Dhexe ee AFRICOM waxaa aad u naqdiyey qaar ka mid ah dalalka Afrika oo aan doonaynin inay marti-geliyaan Xarumaha AFRICOM, marka laga reebo dalka Liberia oo si rasmi ah u aqbashay inay AFRICOM Saldhig ku yeeshaan dalkooda.
Inta badan Hoggaamiyayaasha Afrika waxay walaac xooggan ka muujiyeen inay Kooxaha Hubeysan beegsan doonaan Danaha Maraykanka iyo Xarumooda Milliteri.
Dhinaca kale, Taliska AFRICOM oo la asaasay 12-sano ka hor waxay Xafiisyo ku leeyihiin 38 Waddan oo Afrikaan ah oo ay ku jirto Somalia, waxayna si joogto ah u qaadaan Weeraro dhanka Cirka oo ay la eegtaan Deegaanadda ay Alshabaab ku xooggan yihiin ee qeybo ka mid ah Goballadda Koonfurta, Bartamaha iyo Bariga dalka.